Fondation Jack Ma Tonga fanampiana fahatelo ho an’i Madagasikara
Tonga nijery sy nandray tamin’ny fomba ofisialy ireo fanomezana avy amin’ny fondation Jack Ma, teny Ivato ny ministry ny Fahasalamam-bahoaka Ahmad Ahmad sy ny Masoivoho Sinoa Sem Yang Xiaorong.
Fampitaovana ara-pahasalamana andiany fahatelo natolotry ny Fondation Jack Ma ho an’i Madagasikara izao, izay ahitàna fitaovana fitiliana, arotava, Respirateur, akanjo fiarovana (EPI) natokana ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana izay lohalaharana amin’ny ady amin’ny valanaretina « Coronavirus ». Nankasitraka ny Fondation Jack Ma sy ny masoivoho Sinoa amin’ny fiaraha-miasa akaiky manoloana ny fiatrehana izao ady lehibe izao. Naneho hatrany ny fahavononany sy ny fanamafisany ny fiaraha-miasa amin’i Madagasikara ny sinoa tamin’ny alalan’ny masoivohony. Tsy i Madagasikara irery no misitraka ny fanampiana avy amin’ny Fondation Jack Ma fa firenena maro aty Afrika.